Inline Atc Cnc Machine, Woodworking Atc Cnc Machine, Cnc Cut Cut Machine- JCUT
Emi odude ke Jinan, Shandong Province, Jinan JCUT CNC akụrụngwa Co., Ltd (JCUT-CNC) bụ ụlọ ọrụ CNC kachasị elu nke na-ahụ maka (ahaziri) panel…
Ngwaahịa anyị gụnyere igwe mbido CNC nke na-ebutu ya, igwe usoro cnc anọ, igwe injin ATC ...
Ogo di elu, teknụzụ ọhụụ, Innovation, na Good-service service. Na-enye ụwa ihe eji eme ka CNC dị elu ma dị elu.
Factorylọ ọrụ anyị
1325 gbara mkpị na anọ ATC
Nkọwa nke igwe 1. Mkpụcha, ịkụ ọkpọ, ịkụ aka, ịsa ahụ (ịmebe ihe dị mfe). Enwere ike iji usoro anọ a maka igbatu ma ọ bụ kabinet n'ọnụ ụzọ. Site na iji usoro mgbanwe ngwaọrụ eji arụ ọrụ ngwa ngwa dị elu, ihe omume a na-emezu ihe achọrọ nhazi na-enweghị ntinye aka. Spindles dị iche iche na-arụ ọrụ n'otu oge, na-emeziwanye nhazi nhazi. 2. Ejiri tebụl vacuum adsorption rụọ ọrụ, igwe mgbapụta igwe ojii nwere ike ịmịcha adsorb ihe dị iche iche, na ...
ATC osisi cnc 1325
Nkọwapụta igwe 1. Edebere ngwaọrụ iri na abụọ maka kọmpụta mgbanwe ngwa ngwa akpaka, na ngwaọrụ iri na abụọ nwere ike dochie anya n'efu iji zute ọrụ nhazi dị ike. 2. Na nyocha nke ikpeazụ, a na-ebute abamuru nke lamino mepere emepe site na usoro njikọ njikọ a na-adịghị ahụ anya nke lamino nke enwere ike ịhazi. Uru nke njikọ lamino na-eme ka emeghe lamino mepere emepe ebe niile. E jiri ya tụnyere ụdị njikọ njikọ ndị ọzọ a na-adịghị ahụ anya, ụdị ọgbakọ nke ...
Economic mẹrin usoro R4 osisi ịkpụ osisi
Nkọwapụta igwe 1. Igwe eji igwe ihe eji eme ihe eji eme ya bu ihe eji eme ya. A na-ejikwa isi anọ na-achịkwa isi anọ ma nwee ike ịgbanwe ya, nke nwere ike ịmechaa ọtụtụ atụmatụ nke onye ahịa zụrụ (nhazi usoro ọrụ chọrọ mgbanwe ngwaọrụ n'ime 2-4), nke na-echekwa mgbanwe mma ntuziaka dị n'etiti na bụ dị mma maka ngwaahịa dị iche iche na mmepụta nke ibo ụzọ osisi, arịa ụlọ na mus ...
Nrụpụta ohuru anọ gbara igwe roba ATC osisi cnc
Nkọwa nke igwe 1. pricegwọ dị ntakịrị: ọ dị mma maka ụlọ nrụpụta ihe eji eme ụlọ na obere. Ọbụlagodi dị elu 12-30 puku anọ usoro CNC blanket machine dị obere na ọnụahịa ma e jiri ya tụnyere nke nwere akpa akụ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ nrụpụta ụlọ nwere nnukwu nrụgide ego. 2. Ihe eji eme ulo uka abuo: N’usoro ihe eji abanye ya, usoro ihe anọ ndia diri ihe nlere nke ihe di nfe, nke n’ejiri udiri uzo abuo iji mata ihe…
Biko hapụ anyị ka anyị kpọtụrụ anyị n'ime awa iri abụọ na anọ.
Ihe nnweta 1325 diski atc cnc rauter
Nkọwapụta igwe 1. arụmọrụ dị elu: ọtụtụ ihe na - agagharị agagharị na-arụ ọrụ n'otu oge, nwere ike mezue nhazi nke ngwaahịa n'ọtụtụ. Mmemme mgbanwe akpaka ngwa ngwa, enweghị aka ntuziaka, a na-eme ihe omume ahụ na-akpaghị aka. Iji tebul tebul teknụzụ ikuku teknụzụ emeela emepe emepe emepe emepe eme ihe, na-enwe plọg oghere nwere ikike adsorption siri ike, imewe akụkụ anọ, adsorption nke akụkụ dị iche iche, na-eme ka arụ ọrụ dị mma. 2. Ngwa ngwa t ...
Igwe igwe Atc
Nkọwapụta igwe 1. Ngwunye a na-eji GDZ ma ọ bụ HQD akara Ikuku Ndozi Elu. Ike ukwu 9kw, ike nhazi di elu. N'iji usoro mgbanwe akpaka akpaka, mgbanwe ngwa ngwa. 2. Ejiri ya na servo moto, ihe eji eme ihe dị elu na mbanye mbanye, nke na-eme ka igwe na-agba ọsọ nke ọma, na-enwe mkpọtụ dị ala, ọsọ ọsọ na ezigbo ịkwụ ọtọ. 3. Nnukwu akwa ịla nkịta na-arụ ọrụ dị arọ (nsị na-egwu mmiri ise nwere akụkụ 0.02mm). 4. Nhazi usoro nke ịkpa ụdọ akwa ...
Linear atc cnc rawụta
Nkọwapụta igwe: 1. A na-agbakọ ụlọ a na-agbakọ agbakọ, a na-ejikọ ya ọnụ site na ịka nká (tempering) ịka nká, ọ dịghịkwa mbibi mgbe ogologo oge were. 2. Taiwan Syntec nke sistemụ nrụpụta ọrụ dị elu, yana ezigbo njigide, ezigbo mmezi, nwere ike ijikwa mmecha 3D nhazi, ngwa ngwa, nhazi 3D dị mma, ịkwa akwa na ịkpụ. 3. Spindle moto butere Italytali HSD ike dị elu ikuku eji arụ ọrụ ngwa ngwa, nkenke dị elu, ...
Osisi rawụta atc
Nkọwa nke igwe 1. Blanking, mkpọpu mmiri, mbepụ, isi ihe dị omimi, egwe ọka, wdg, mgbanaka anọ na-atụgharị isi n'okpuru mma, mma ịgbanwe usoro n'enweghị nkwụsị, iji nweta akpaaka. 2. Njikwa ihe eji arụ ọrụ njikwa, nzuzu ọrụ, ndị na-arụ ọrụ nwere ike ịnọ na ọrụ mgbe ọzụzụ dị mfe, enweghị mkpa maka ndị ọrụ aka ọrụ.The igwe na-akpali nimily, arụmọrụ dị elu, na-enyere gị aka ịghọta mmụpụta arụpụtaghị ihe. Ngwaọrụ ahụ kwagidere HQD ike dị elu nke ikuku jụrụ oyi, ọrụ zuru oke ...
Uru nke igwe igwe CNC
Ihe igwe CNC, nke makwaara dika ihe eji emeputa ihe eji eme ihe. Dị ka aha ahụ na-egosi, usoro niile sitere na nbudata, ịkpụ, mkpọda oghere na oghere nke efere ahụ ga-emecha otu aga. Ọ na-edochi mmepụta na nhazi ya nke ọma. Yabụ, kedu nke bụ…
JCUT CNC igwe na - ahụ maka inyocha igwe na - arụ ọrụ
Nsogbu ọdịnala bụ: 1. Igwe igwe na-ejigidebeghị: a na-arụzigharị okporo ụzọ ụgbọ oloko, ngwa igwe anaghị ada ada, ọrụ ọrụ adịghị mma, ndụ igwe adịghị mma, igwe kwụ ọtọ Z njehie buru ibu, ma akụkụ a họọrọ ahọrọ adịghị mma! Ihe dr ...
R9 usoro CNC na-akwọ ụgbọ igwe R9 usoro CNC igwe na-anya ụgbọ ala: igwe dị mkpa: a pụrụ iji mpempe ya dochie ụdị ụdị ngwá ụlọ na-akpụ akpụ nhazi nhazi ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ ụlọ ọnụ ụzọ dị nro. CNC usoro CNC…